GML employees down tools - Business Daily News Zimbabwe
"We have not been getting consistent salaries for the past 10 years and when we did receive the salaries they were 70% of what we were supposed to get. We did not know for which month we were receiving the salaries," Fanuel Gadziwa, GML workers committee chairperson, said.
Zimbabwe Chemical and Plastic Allied Workers Union (ZCPAWU) president Nyati said: "I am no there. I don't even know there is a strike. They didn't tell me of any grievances, I mean the workers committee chairperson, they are doing things improperly. I cannot expect a salary when the company is not producing."
ZFTU secretary for policy implementation and research and ZCPAWU national organising secretary Jacob Mupeti said Nyathi was not serving workers' interests.
"Two company vehicles, a tractor and a forklift are at Nyathi's house. He can't claim to be serving the interests of the workers when he is on the side of the Croatian investors. He is working with Mushivirindi. He is also 72 years old and should have been retired years, back but he is still with the company because he is serving the interests of the owners."
The matter took a political twist as the Zimbabwe Federation Trade Union (ZFTU) took over and chanted Zanu-PF slogans before addressing the workers.